Sosialy Archives - Page 3 sur 154 -
Fetin’ny krismasy 2018 : Samy nanao izay ho afany ny rehetra
26/12/2018 admintriatra 0
Vita iny ny Noely na Krismasy, fankalazana ny nahaterahan’ilay Mpamonjy. Tamin’ny ankapobeny dia nilamina ny fety, mety ho vokatry ny tsy fahampiana na fahasahiranana ka mihafy sy mitsitsy. Hita tokoa fa samy nanao izay ho …Tohiny
Sekolin’ny mozika : Nanolotra ny « Noelin’ny mahantra »
24/12/2018 admintriatra 0
Matetika dia mitondra hafaliana ho an’ny mpiangaly azy sy ny mpihaino azy ny mozika. Ankoatra ny fampianarana mozika, dia miezaka mizara hafaliana ihany koa ny Ecole de Guitare de Madagascar na ny EGM 67ha, na …Tohiny
Famatsiana herinaratra : Niverina amin’ny laoniny
22/12/2018 admintriatra 0
Raha toa ka nanambara sy nampahafantatra ny mpanjifa ny teo anivon’ny orinasa Jirama amin’ny tsy maintsy hisian’ny fahatapahan-jiro mifandimby amin’ireo faritra maro, ny 20 desambra teo, nivaha ihany ny olana mahakasika izany. Araka izany, nitondra …Tohiny
Fivarotana hani-masaka : Olona 6 maty tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo
21/12/2018 admintriatra 0
Manodidina ny 5 000 ny isan’ireo mpivarotra hani-masaka manerana ny Nosy, araka ny fanadihadiana nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny taona 2017. Ny ankamaroan’izy ireo anefa dia tsy manaraka ny fenitra tokony harahina. Ny 30 isan-jaton’ny fivarotana …Tohiny